Erdogan oo ugu hanjabay Yurub inuu ku furi doono albaabkii Muhaajiriinta haddii aysan kala shaqeynin…
Mogadishu - 13:56:13
Thursday September 05, 2019 - 22:32:25 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu hanjabay Yurub in uu ku soo deyn doono qaxootiga uu albaabada ka xirtay haddii aysan kala shaqeyn qorshaha uu ku doonayo in uu goob xasiloon oo ka caagan dhaq dhaqaaqyada hubeysan uu ka dhiso waqooyiga Suuriya.
Erdogan wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay qorsheyneyso in ay goobtaasi rabshadaha ka caaggan ugu talo gashay inay dejiso 1 Milyan oo qaxooti Suuriyaan ah, oo qayb ka ah 3 milyan iyo 500,000 Suuriyaan ah kuwaas oo ku nool Turkiga kana soo cararay dagaallada ka socda Suuriya.
Waxyaabaha kale ee uu doonayo Erdogan ayaa ah in goobtaasi nabadda ah ay ka madax bannaanaato dagaalyahannada Kurdiyiinta Suuriya ee uu Mareykanku taageero, kuwaas oo Ankara ay u aragto argagixiso halis ku ah Turkiga.
Haatan Turkigu waxay haystaan qaybo ka mid ah Waqooyiga Suuriya, iyagoo sheegay in halkaasi ay u guureen illaa 350,000 oo Suuriyiin ah, halka kuwo kale oo badanna ay doonayaan inay dib u celiyaan.
Madaxweyne Erdogan oo hadal ka jeedinayay Ankara ayaa yiri "Waxaa naga go’an in aan goob aamin ah ka sameyno Waqooyiga Suuriya, si aan u awoodno in aan magaallooyin habeysan oo 30km ah ka dhisno halkaasi, kuwaasoo ka wanaagsan teendhooyinka, noo ogolaada in aan halkaasi ka aas aasno goob rabshadaha ka caaggan".
"Waxaan idinkaga baahannahay kaalmo dhanka Loojistikada ah, waxaana awoodnaa in aan sidaasi walaaleheenna Suuriya tartiib ugu celinno xuduudda aan la leenahay dalkaasi ee 450km ah".
Erdogan ayaa sii raaciyay "Ama taasi inay dhacdo ama in aan albaabka furno wax ka dhexeeya ma lahan, haddii aad nagu taageeri weysaan arrintaasi haddii aad tihiin Midowga Yurub iga raalli noqda annaga keligeen culeyskani ma qaadi karno".